I-MezCali Cabaña-entre árboles-AC-Yellow Submarine
I-Acurrucado en una arboleda a pocos pasos del pueblo, Mezcali Cabañas es una escapada perfecta para los viajeros. Mire de cerca y podrás ver una iguana o un canario justo afuera de su ventana!
Iqhwakele esikhotheni sezihlahla nje izinyathelo ezingaphandle kwedolobha, i-Mezcali Cabanas iyindawo ekahle yokubaleka kubahambi abaya e-Mazunte. Bheka eduze futhi ungase
bona iguana noma i-canary ngaphandle kwefasitela lakho!
I-complex inamakhabethe amathathu Esimanjemanje futhi asesitayeleni, athinta ezothando, i-suite ifakwe kahle nge-inthanethi, i-coffeemaker, umbhede olingana nenkosi onethezekile, igumbi lokugezela langasese elineshawa kanye ne-balcony yangasese ehlakaniphile egcwele i-hammock swing. Impahla ingeyobuciko futhi yenziwe ngesandla abasingathi bakho benziwe ngezinto zemvelo, ngokunaka okuhle kakhulu kwemininingwane.
Ikhishi elihlanganyelwe linebanga legesi nesiqandisi, kanye nombhoshongo wamanzi.
Ababungazi bakho, u-Edvin & Mime bakunikeza yonke imfudumalo yekhaya, kanye nengcebo yolwazi mayelana nezindawo nezinsiza zasendaweni.
Izitolo nezindawo zokudlela eziseduze zigcwele, futhi ibhishi elihle laseMazunte liyimizuzu eyishumi nje yokuhamba edolobheni. I-Ponte Cometa eseduze izidla ngokushona kwelanga okungajwayelekile esifundeni.
Hlola ezinye izinketho ezise- Mazunte namaphethelo